true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 3 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Isinyathelo sokuqala ekusebenzeni kwezinhlelo ezizoguqula amaphupho akho abe iqiniso ukuqonda amagama ayisisekelo asetshenziswe endabeni yokuhlela.
icebo liyindlela yokuthi ungakufeza kanjani okuthile. Kuqukethe izenzo eziyisisekelo okufanele zenziwe ukuthuthukisa okuthile noma ukuxazulula inkinga. Icebo livame ukususelwa kwizinsizakusebenza ezikhona (imali, abasebenzi, imishini, izindawo, izinsiza, okuhlinzekwayo, njll.) futhi kufaka nemibono ehlakaniphile yokuthi ungazisebenzisa kanjani.
Ukuze kwenziwe icebo lenzeke, kufanele luguqulwe lube yizinyathelo ezithile nezenzo ezidingekayo ukufeza lokho icebo okufanele likwenze. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa uhlelo.
Uhlelo uchungechunge lwezinyathelo ngokulandelana ukufeza icebo. Icebo kufanele libe khona engqondweni yomuntu, noma ngabe libhaliwe noma cha, ngaphambi kokuthi uhlelo lubhalwe.
Isinyathelo sohlelo sibizwa ngokuthi i-target. I-target isenzo okufanele senziwe ukuze kufinyelelwe emphumeleni ofiswayo.
Izinhlelo zenziwa ama-targets ahlukahlukene okuhloswe ukuthi enziwe ngesikhathi. Ngayinye yalezi zinhlobo zama-targets zichazwe ngezansi.
I-target enkululukazi isifiso esibanzi, esivamile (lokho umuntu afuna ukukufeza). Kungathatha isikhathi eside. Izibonelo zama-targets amakhulu “ukuthola yonke imishini nezinto ezisetshenziswayo enkampanini” noma “ukuthola isakhiwo senkampani ngentengo efanele.”
I-target eyisisekelo yizinyathelo zokuhleleka, zabasebenzi nezokuxhumana okumele zigcinwe. Uma lama-targets engafinyelelwanga, ama-targets asele kuzoba nzima ukuwenza futhi uhlelo lungema lapho.
Eyokuqala yalama-targets ayisisekelo yile: UMUNTU LAPHO
Bese: INJONGO EFANELEKILE
Bese: OTHILE ATHATHE UKUZIBOPHEZELA NGENDAWO NOMA NGESENZO
Bese kuthi: ISIMO, IPHETHINI NOMA UKWAKHEKA KWENKAMPANI KULUNGISWE KAHLE
Bese kuthi: ISIMO, IPHETHINI NOMA UKWAKHEKA KWENKAMPANI KUBANJWE NOMA KUSUNGULWE KABUSHA
Bese: UKUHLELA OKUSEBENZAYO
Ngama-targets angenhla, uhlelo lungaqhubeka. KODWA UMA LEZI ZILAHLWA NOMA INDAWO YAZO INGAGCWALISWA, kuzothi nanoma imaphi ama-targets abekiwe ngemuva kwalokho kuzoba nzima ukuwenza futhi ngeke enziwe nhlobo.
Ama-targets ayisisekelo futhi afaka lezibonelo ezilandelayo:
“Yamukela umsebenzi wakho owabelwe wona.”
“Funda futhi uqonde uhlelo ozobe ulwenza.”
I-target esemqoka YINTO OKUMELE YENZIWE UKUZE ISEBENZE NHLOBO.
Ukubona ama-targets amqoka, kufanele kuhlolwe indawo ukuze kutholakale ukuthi kwenzekani nokuthi yini impahla, abasebenzi noma inkampani okufanele sisebenze nayo.
Ngokulandelayo sithola lawo maphuzu (ngesinye ISIKHATHI ngenkathi kusetshenzwa) amisa noma alimaze impumelelo ezayo. Lawa maphuzu aguqulwe abe ama-targets avame ukusho ukuthi kufanele kwenziwe okuthile noma ukuthi okuthile akufanele kwenziwe.
Lezi izibonelo zama-targets asemqoka:
“Zihlolele ngokwakho; ungathathi umbiko womunye.”
“Ungayamukeli imiyalo evela komunye umuntu ngaphandle kwesikhulu sakho esiqondile.”
I-target enemibandela yileyo eyenziwayo ukuthola imininingwane noma uma iphrojekthi ingenziwa noma lapho ingenziwa khona, njll.
Uke wabona abanye abantu besebenza impilo yabo yonke ukuze “bacebe” noma into enjalo ukuze “bavakashe wonke umhlaba,” kepha akaze bakwenze. Omunye umuntu, noma kunjalo, wenza i-target “ukuvakasha umhlaba” futhi aqonde kuyo ngqo futhi akwenze. Lolu hlobo lwe-target lwaziwa njenge-target enemibandela: Uma nje benginga ______, khona-ke singakwazi ______ bese sifeza ______. Lokhu kulungile, yebo, kuze kufike lapho kungenzeki okungokoqobo.
Kunezigaba zonke zama-targets anemibandela ezingenawo UMA kuzona. Lokhu kungama-targets amukelekile. Ineziningi IZIFISO kuzo, “Sizokwenza ______ bese si-______.”
Kwesinye isikhathi kwenzeka okuthile okungazelelwe ongasizakala ngakho. Lokhu “kuyinhlanhla enhle” kuphela. Uyayisebenzisa futhi uhlele kabusha ngokushesha uma kwenzeka. Inhlanhla enhle ayithembekile, ngakho-ke akuwona umbono omuhle ukubheka kuyo njengesixazululo.
I-target enemibandela esebenzayo kungaba yilokhu:
“Sizoya lapho ukubona ukuthi indawo iwusizo yini.”
Wonke ama-targets anemibandela nngokwangempela yizenzo zokuqoqa idatha kuqala futhi, uma kulungile, bese uqala ukusebenza.
I-target esebenzayo yileyo eshoyo ngqo ukuthi yiziphi izenzo ezidinga ukwenziwa. Imvamisa ifaka ISIKHATHI esinqunyelwe lapho kumele iphelele ukuze ingene namanye ama-targets.
Izibonelo zama-targets asebenzayo zibandakanya lokhu okulandelayo:
“Hlanza amakilasi ngenkathi abafundi besekhefini lasehlobo.”
“Qeqesha bonke abasebenzi ngezinqubo ezintsha zokuthengisa ngaphambi kokubavumela ukuba basebenze namakhasimende.”
Ama-targets okukhiqiza yilawo abeka inani lezinto, imvamisa ngokumelene nesikhathi.
Lezi izibonelo zama-targets okukhiqiza:
“Zonke izincwadi zokwamukelwa zithunyelwe abafundi ngenkwindla elilandelayo zingu 15 kuMbasa.”
“Izincwadi eziyizinkulungwane ezingamashumi amahlanu zicindezelwe ngenyanga ezayo.”
Njengoba izibalo zibonakalisa ukukhiqizwa kalula, lokhu kungadala ukuthi inhlangano noma umsebenzi uhlanganyele kakhulu AMA-TARGETS OKUKHIQIZA kangangokuba yehluleke ukubeka ama-targets anemibandela, asebenzayo noma ayisisekelo. Lapho lokhu kwenzeka, ukukhiqizwa kungabhekana nokuwohloka okubangelwa ukuntuleka kokuhlela lokhu okushiwo kwezinye izinhlobo zama-targets.
KUFANELE UHLOLE FUTHI UCWANINGO FUTHI UQOQE IDATHA BESE ULUNGISA AMA-TARGETS OKUSEBENZA NAYISISEKELO NGAPHAMBI KOLUNGISA AMA-TARGETS OKUKHIQIZA.
Isizathu esijwayelekile sokuthi izibalo zizokwehla ukuthi ama-targets esisekelo awenziwanga. Lezi ziyaphuma futhi akekho obonayo ukuthi lokhu kuthinta kabi ukukhiqizwa. Ukukhiqizwa kuncike kwamanye ngaphambili ama-targets agcinwe kuwo.
Okulandelayo isifinyezo esifushane sezinhlobo ezahlukahlukene zama-targets ezakha uhlelo.
Isifiso ngasinye (lokho umuntu afuna ukukufeza). Kungathatha sikhathi eside. Isibonelo: “Ukwenza ukuthi yonke imishini nezimpahla ezikwinkampani kusebenze.”
Lezi yizinyathelo zokuhlela, abasebenzi nezokuxhumana okufanele bazigcine. Lama-targets abhekana nabantu, izindlela zokuxhumana, izimpahla kanye nokulungisa uhlelo. Isibonelo: “Ukubeka umuntu ophethe ukukuhlelela futhi akubekele ama-targets asele ayisisekelo” noma “Ukuqalisa kabusha uhlelo lokuxhumana olulahlekile.”
Lawa ama-targets okumele abhekelwe ukusebenza kuwo, ngokususelwa ekuhlolweni kwendawo le umuntu asebenzela kuyona.
Lawa ngama-targets alungiswe NJENGENDLELA/NOMA ukuthola imininingwane noma ukuthi iphrojekthi ingenziwa noma kuphi noma kubani.
Lezi zibeka izinkomba nezenzo noma uhlelo lwemicimbi noma lwezikhathi.
Lokhu kulungisa amanani afana nezibalo.